Kucashunwe “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Umsebenzi owenziwa nguJesu wawumane uyisigaba esingaphezulu kweTestamente Elidala; wasetshenziselwa ukuqala inkathi, nokuhola leyo nkathi. Kungani athi, “Angizile ukuzochitha umthetho, kodwa ukuzowugcwalisa”? Nokho emsebenzini wakhe kuningi okwakwehlukile emithethweni eyayilandelwa ngama-Israyeli eTestamente Elidala, ngoba akezanga ukuzolalela umthetho, kodwa ukuwugcwalisa. Indlela yokuwugcwalisa yayihlanganisa izinto eziningi zangempela: Umsebenzi wakhe wawungokoqobo futhi ungowangempela, futhi, ngaphezu kwalokho, wawuphila, futhi ungekhona ukubambelela emfundisweni ngobumpumputhe. Ngabe ama-Israyeli ayengaligcini iSabatha? Lapho uJesu efika akazange aligcine iSabatha, ngoba wathi iNdodana yomuntu yayiyiNkosi yeSabatha, futhi lapho iNkosi yeSabatha ifika, yayizokwenza njengokufisa Kwayo. Wayezele ukugcwalisa imithetho yeTestamente Elidala nokuguqula imithetho. Konke lokhu okwenziwa namuhla kusukela kulokho okungokwamanje, nokho kusesesisekelweni somsebenzi kaJehova ngeNkathi Yomthetho, futhi akweqi ngale kwalo mklamo. Ukuqapha ulimi lwakho nokungaphingi, ngokwesibonelo—ingabe lena akuyona imithetho yeTestamente Elidala? Namuhla, okulindeleke kuwe namuhla akupheleli nje eMiyalweni Eyishumi, kodwa kuqukethe imiyalo nemithetho ephakeme kakhulu kunaleyo eyafika ngaphambili, nokho lokho akusho ukuthi okwafika phambilini sekwachithwa, ngoba isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu senziwa esisekelweni sesigaba esisandulelayo. Ngalokho uJehova akuletha kwa-Israyeli, efuna abantu banikele imihlatshelo, bahloniphe abazali babo, bangakhonzi izithixo, bangashayi noma bathuke abanye, bangaphingi, bangabhemi noma baphuze, bangadli izinto ezizifele noma baphuze igazi: ngabe lokhu akwakhi isisekelo sokwenza kwenu nanamuhla? Yisisekelo senkathi eyedlule esenze ukuba umsebenzi wenziwe kuze kwaba namuhla. Nakuba imithetho yenkathi endala ingasashiwo, nezimfuno ezintsha sezifuniwe kuwe, le mithetho ayiqediwe, futhi kunalokho, iphakanyiselwe esikhundleni esiphezulu ngokwengeziwe. Ukuthi isiqediwe kusho ukuthi inkathi edlule isiphelelwe yisikhathi, kanti kunemiyalelo okufanele uhlale uyihlonipha kuze kube phakade. Imiyalelo yenkathi edlule isivele yenziwe, ivele isiwukuphila komuntu, futhi akukho sidingo sokuphinda imiyalelo yokungabhemi, ukungaphuzi, njalo njalo. Phezu kwalesi sisekelo, imiyalelo emisha iyabekwa ngokuhambelana nezidingo namuhla, ngokuhambisana nesiqu sakho, nangokuhambisana nomsebenzi wanamuhla. Ukumemezela imiyalelo yenkathi entsha akusho ukuqeda imiyalelo yenkathi endala, kodwa ukuyiphakamisa phezu kwalesi sisekelo, ukwenza izenzo zomuntu ziphelele ngokwengeziwe, futhi zihambisane kakhudlwana nokungokoqobo. Uma, namuhla benivunyelwe ukuba nilandele kuphela imiyalelo futhi niphile ngemithetho yeTestamente Elidala, ngendlela efana neyama-Israyeli, futhi ukuba, ngaphezulu, bekumele nize nibambe ngekhanda imithetho eyabekwa nguJehova, bekungeke kwenzeke ukuba niguquke. Uma bekufanele niphile ngaleyo mithetho embalwa enemingcele noma nibambe ngekhanda imithetho engabaleki, imvelo yenu endala ibizohlala igxile ngokujulile, futhi ibingeke ibe khona indlela yokuyisiphula. Ngakho benizogcina senonakele ngokwengeziwe, futhi akekho noyedwa phakathi kwenu obeyolalela. Okusho ukuthi imiyalo elula embalwa noma imithetho engabaleki ngeke ikwazi ukunisiza ukuba nazi izenzo zikaJehova. Nina anifani nama-Israyeli: Ngokulandela imithetho nokubamba ngekhanda imiyalo akwazi ukubona izenzo zikaJehova, nokuzinikela Kuye yedwa, kodwa niyehluleka ukufinyelela kulokhu, futhi imiyalelo embalwa yenkathi yeTestamente Elidala ayigcini nje ngokunenza ningakwazi ukunikela ngenhliziyo yenu, noma ngokunivikela kodwa kunalokho izonenza ninganaki futhi inehlisele eHayidesi. Ngenxa yokuthi umsebenzi Wami ungumsebenzi wokunqoba, futhi ubhekiswe ekungalalelini nasemvelweni yenu endala. Amazwi anomusa kaJehova noJesu akude namazwi anzima okwahlulela namuhla. Ngaphandle kwamazwi aqine kanjalo, bekungeke kwenzeke ukuba kunqotshwe nina “bochwepheshe”, ababe ngabangalaleli iminyaka eyizinkulungwane. Imithetho yeTestamente Elidala kudala yaphelelwa ngamandla kinina futhi ukwahlulelwa kwanamuhla kuyidlula kude imithetho yakudala. Into enifanele kakhulu ukwahlulelwa hhayi imingcele engatheni yemithetho, ngoba nina anisona isintu sasekuqaleni, kodwa niyisintu esesonakele iminyaka eyizinkulungwane. Okumele umuntu afinyelele kukho manje kungokuhambisana nesimo sangempela somuntu namuhla, ngokuhambisana nezinga nesiqu sangempela somuntu wanamuhla futhi akudingi ukuba ulandele imfundiso. Lokhu kwenzelwa ukuthi kutholakale izinguquko emvelweni yakho endala, futhi ukuze ukwazi ukuyibeka eceleni imibono yakho.
Emsebenzini wensindiso yomuntu, izigaba ezintathu zenziwe, okungukuthi impi noSathane ihlukaniswe izigaba ezintathu ngaphambi kokuhlulwa okuphelele kukaSathane. Kepha iqiniso elingaphakathi lomsebenzi wonkana wempi noSathane imiphumela yawo itholakala ngokuthela umusa phezu komuntu, kanye nokuba umhlabelo wesono womuntu, ukuthethelela izono zomuntu, ukunqoba umuntu, nokuphelelisa umuntu. Empeleni, impi noSathane akukhona ukuhloma izikhali ubhekane noSathane, kodwa insindiso yomuntu, ukusebenza impilo yomuntu, kanye nokushintsha isimo somuntu ukuze afakazele uNkulunkulu. USathane unqotshwa kanje. USathane unqotshwa ngokushintsha isimo esikhohlakele somuntu. Uma uSathane esehluliwe, okungukuthi, uma umuntu esesindisiwe ngokuphelele, uSathane ojabhile uyoboshwa ngokuphelele, futhi ngaleyo ndlela, umuntu uyobe esesindisiwe ngokuphelele. Ngakho, ingqikithi yensindiso yomuntu impi noSathane, kanti impi noSathane ibonakaliswa esikakhulukazi ensindisweni yomuntu. Isigaba sezinsuku zokugcina, lapho umuntu ezonqotshwa khona, isigaba sokugcina sempi noSathane, kanti futhi umsebenzi wokusindiswa okuphelele komuntu emandleni kaSathane. Incazelo yangaphakathi yokunqotshwa komuntu ukubuya kokusamuntu kukaSathane, umuntu owonakaliswe nguSathane, kuMdali, emuva kokunqotshwa kwakhe, ngalokho uyoshiya uSathane futhi abuyele ngokuphelele kuNkulunkulu. Ngale ndlela umuntu uyobe esesindisiwe ngokuphelele. Ngakho, umsebenzi wokunqoba umsebenzi wokugcina empini ebhekene noSathane, kanye nesigaba sokugcina ekuphatheni kukaNkulunkulu ukuze kuhlulwe uSathane. Ngaphandle kwalo msebenzi, ukusindiswa komuntu okuphelele bekungeke kwenzeke neze ekugcineni, ukuhlulwa ngokuphelele kukaSathane nakho bekungeke kwenzeke neze, futhi isintu besingeke neze sikwazi ukungena esiphethweni esimangalisayo, noma ukukhululeka ethonyeni likaSathane. Ngenxa yalokho, umsebenzi wokusindiswa komuntu ngeke uphethwe ngaphambi kukuthi impi noSathane iphethwe, ngoba umnyombo womsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu ungenxa yokusindiswa kwesintu. Isintu sasekuqaleni sasisezandleni zikaNkulunkulu, kodwa ngenxa yokulingwa nguSathane nokonakaliswa, umuntu waboshwa nguSathane futhi wawela ezandleni zomubi. Ngakho, uSathane waba yinto okufanele yehlulwe emsebenzini wokuphatha kukaNkulunkulu. Ngoba uSathane wamngena umuntu, nangenxa yokuthi umuntu uwumsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu, uma umuntu ezosindiswa, kufanele ahlwithwe ezandleni zikaSathane, okusho ukuthi umuntu kufanele abuyiswe emva kokuthunjwa nguSathane. Ngalokhu, uSathane kufanele anqotshwe ngezinguquko esimweni somuntu esidala, izinguquko ezibuyisela umqondo wakhe wokuqala, bese ngale Ndlela, umuntu, obethunjiwe, ehlwithwa ezandleni zikaSathane. Uma umuntu ekhululiwe ethonyeni nokuboshwa nguSathane, uSathane uyojabhiswa, umuntu ekugcineni uyobuyiselwa emuva, futhi uSathane uyohlulwa. Futhi ngenxa yokuthi umuntu usekhululiwe ethonyeni elimnyama likaSathane, umuntu uyoba impango yayo yonke lempi, futhi uSathane uyoba umenziwa oyojeziswa uma lempi seyiphelile, emuva kwalokho umsebenzi usuwonkana wokusindiswa komuntu uyobe usuqediwe.
Okwedlule：Ubudlelwane Phakathi Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu.
3. Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Igunya namandla oMdali avezwa ngen…